Akazodzikama yemasiraidhi wechikoro uye mubereko twasu-mutsetse mutsividzo vanoronga
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Akazodzikama yemasiraidhi wechikoro uye mubereko twasu-mutsetse mutsividzo vanoronga
Akakwereta mari, izvozvo ucharipwa akafanorongerwa nomutowo panguva nokukwereta.
wakajairika nepakati yemasiraidhi wechikoro uye mubereko twasu-mutsetse mutsividzo zano pakati pavo.
Uyu, mutengi mari uye kadhi ndiyo nzira rinoshandiswawo, dzakadai zvakanakira nekuipira ndiye Will chinokosha zvakadaro Chii.
vakarondedzera / mukuru wechikoro uye mubereko wakaiswa-mwero wokurarama
chokuita / ndicho chikuru yakatarwa-mwero wokurarama
chii akazodzikama yemasiraidhi wechikoro uye mubereko twasu-mutsetse mutsividzo nzira?
nepakati yemasiraidhi wechikoro uye mubereko twasu-mutsetse mutsividzo nzira ndiko nevakawanda vachinzi "nepakati yemasiraidhi wokurarama nzira".
sezvo musiyano nemamwe mutsividzo nzira, chemhosva mari nokuda nokukwereta haachinji akava rutivi.
Uyezve, sezvo nokukwereta munyika wokurarama ezvinhu, inewo pfungwa inodzokororwa chikwereti hakurevi kusapfuudza muganhu.
munhu kazhinji kuonekwa zvikwereti kadhi, mumakore achangopfuura nevatengi mari kuti nderei nokukwereta vachishandisa nzira iyi mazhinji. Kamwe ini kushandisa
caching vachati kuti ndiyo nzira kuti ziso. Dzinenge mienzaniso
nepakati yemasiraidhi wechikoro uye mubereko twasu-mutsetse mutsividzo zano
Somuenzaniso 200,000 Yen akakweretwa mhindu prices 14%, mari kuti achidzorerwezve pashure mwedzi mumwe ndeinotevera.
(20 Man × 14%) × (30 ÷ 365 mazuva)
zvemasikati 4 huwandu, uye kufunga, imi munoti haisi guru chaizvo mari.
mutsividzo iri kuripira pamwedzi wakaiswa mutsividzo mari achizosiyana zvichienderana nechiyero. Kana akatora nzira, dzakadai kuwedzera pakati
ndiko, Ngatiyeuke kuti mumwe nguva pamari yezvikwereti iri kubhadharwa okwira.
Benefits vari zvakanakira
nepakati yemasiraidhi wechikoro uye mubereko twasu-mutsetse mutsividzo zano nechiyero yemasiraidhi wechikoro uye mubereko twasu-mutsetse mutsividzo nzira ndechokuti imi nyore kuti urongwa pamwedzi mutsividzo mari.
Nokuda kwechikonzero ichi, hazvina zvakare shoma mukana nonoka uye mukana upi nokusaziva. Akadai
mupenyu oga, basa mari yako, munhu uyo ??aizova nzira kuzopiwawo pakati audzwa.
Uyezve, nokuita nokukwereta kambani, zvinokwanisika kuti ini kuderedzwa pamari yezvikwereti iri kubhadharwa.
Iyi ndiyo nguva mutsividzo, kana vashoma pane pakutanga ari mukuru, chinhu chinogona kuitwa chikumbiro mune akadai runhare kana hofisi. Akadai
kungoerekana muchipatara, kunyange kuitika ndiyo chero mukana rokutambudzika, rava ngozi uyewo nyore kudzivisa kuti chemhosva haagoni kuitwa.
Kunze, apo pakarepo mari harina iri nani guru kukwanisa kukwereta mamwe kana pane nzvimbo iri mari rakumbirwa. Kana kushandiswa muna
kadhi zvikwereti, kuwedzera vakazvitsaurira ATM zvakare, uyewo zvava kuwanikwa kubva ATM ari nyore chitoro. Kana isu
mwedzi pamari yezvikwereti iri kubhadharwa kuenda zvakasimba, zvichaita kuti nyore kumisa kutenderera kuti kukwereta chete kana zvichidiwa ndiye makodzero.
chinetso nechiyero yemasiraidhi wechikoro uye mubereko twasu-mutsetse mutsividzo zano < Zvakaipira mu / H2>
nepakati yemasiraidhi wechikoro uye mubereko twasu-mutsetse mutsividzo nzira, pane nyaya muya chemhosva inova kufarira, zvinogona kutaurwa kuti. Apo
kuramba kubhadhara risingamboshandisi mari anopiwa mwedzi wose, kwete kuderera rakanyatsojeka muripo mari, hazvina kushandura mutoro pamusoro chikwama chako.
Somugumisiro, chichagamuchirwa Akatsoropodzwa fungidziro kuti kune mari yacho pamwedzi wakaiswa, iwe mugwagwa abhadhare anova kure.
Naizvozvo, kana imi regai kushandisa kubatsira pamwe ziso kuronga munguva pfupi, kwete kwenguva, uyewo mutsividzo haangazodzingi kuguma nokusingaperi.
Izvi ndezvechokwadiwo chero chemhosva nzira, asi kana musingadi kudzokera kana unogona kudzoka, kuchaita kuti somugumisiro kuti gare gare kutambudza mutsipa wake.
Mukuwedzera, panyaya kuita nokukwereta panzira, vanofanira kuwedzera mari panguva mutsividzo, icho truism kuti hamucharambi zvachose ipfupi.
pamusoro kubvuma nguva dzose "kuti vadzokere", Edza kuyeuka vakaronga kushandiswa.
nepakati yemasiraidhi wechikoro uye mubereko twasu-mutsetse mutsividzo nzira, maererano nemari kana nokukwereta pachiyero yakasainwa kumusoro nokuti nokukwereta, ndizvo zvakaita pamwedzi pamari yezvikwereti iri kubhadharwa siyana.
mutsividzo chitsama kuronga kuri nyore kumisa, ndechokuti norugare rwepfungwa naani anoda kukwereta kekutanga mari wavanobhadhara.
aiva nonoka kukanganwa chemhosva musi, kuti iwe uchava Zvinogonekawo kuderedza zvikanganiso.
Zvisinei kubatsira Asiwo kana mukasandizivisa zvakasimba kuzopiwawo plan, hanya zvinofanira kutorwa kuti zvichaita anoteverwa upenyu kuti anodzoka chete kufarira kunyange pashure nokusingaperi. Zvakadai seapo kuti
mari mari, pamwe chete kuti mari, uye yeuka kuti kuderedza kangani mutsividzo kunyange zvishoma, akati kuva vakanaka nyore kushandisa. Zvakaipira muna
pachiyero yemasiraidhi wechikoro uye mubereko twasu-mutsetse mutsividzo nzira, pane nyaya muya chemhosva inova kufarira, zvinogona kutaurwa kuti. Apo
mari mari, pamwe chete kuti mari, uye yeuka kuti kuderedza kangani mutsividzo kunyange zvishoma, akati kuva vakanaka nyore kushandisa. The
nepakati yemasiraidhi wechikoro uye mubereko twasu-mutsetse mutsividzo nzira, maererano nemari kana nokukwereta pachiyero yakasainwa kumusoro nokuti nokukwereta, akasiyana pamwedzi pamari yezvikwereti iri kubhadharwa.
mari mari, pamwe chete kuti mari, uye yeuka kuti kuderedza kangani mutsividzo kunyange zvishoma, akati kuva vakanaka nyore kushandisa.